Gaalkacyo: Ma Daarood mise Hawiye, kee leh? – Maqaal | Gaaloos.com
Home » maqaal » News » Gaalkacyo: Ma Daarood mise Hawiye, kee leh? – Maqaal
Suldaan Galmudug ah: Magaalada waxba kuma lihin. Heyadihii dawladda, warshad, Airport, suuqyadii, intuba waxba kuma lihin. Taa ayaa keentay colaadda joogtada ah. Teeda kale, 5ta degmo oo Mudug, labo waa inoo gaar; waa Hobyo iyo Xarardheere, 3da kale (Jarriiban, Goldogob, iyo Galkacyo waannu wada degnaa)…..*
Waxgarad Puntland ah: Dhankiinnaa wixii oo idil jiraan. Dawlad Somaliyeed hantideedii iyo hantidi shacabka Xamar baa looga yimid. Adinkaa faraha ku haya. Meeshaan annagaa dhisannay. Halla gaaro goorta xisaab la isugu yimaaddo. Hadda reer walba meeshood Allaha ku ammaansado. Bal sheeg hal guri oo aad kul leedahay Jarriiban iyo Goldogob. Kuweygii Hobyo iyo Xarardheere ku yiil ka imid mana tegi kari. Xamarna inta iga joogto waa ku qatanyihiin…..*
(*Waa sida hadalkoodu tilmaamayey ee maaha ereyadoodi)
Dood laga sii daayey Radio Daljir, 04/12/2015; Barnaamijka Maanhadal; Jamaal Faarax Aadan
Waa kaa dareenka guud ee labada reer oo kala sheegta Galmudug iyo Puntland. Waa kawaa hormooddadoodi. Waa kuwaa hoggaamadoodi iyo waxgaradkooki. Waa kaaf iyo kale dheeri. Waxaa lakala sheeganayaa deegaan dhammaantood iyo inta qabaail kale oo Somaliyeed ka wada badan. Waa deegaan baaxad weyn. Waa deegaan doonaya horumar iyo hawl badan. Waa deegaan haddii ay gacmaha isqabsadaan oo xooggooda geliyaan, horumarkiisa wax badan dhalaya. Xoogga iyo tamarta ay gasheen colaadda lagu hoogay oo geerida iyo burburka keentay, maxaa diiday inay gashaan tacab iyo wadajir iyo iskaashi? Waxaa diiday anaaniyad qabiil, colaad hore, utun iyo godob hore oo lakala tirsanayo.
Waddanka oo idil waxaa ka taagan tan ka taagan Galkacyo. Reer walba oo Somaliyeed waxaa dhexyaal colaad hoose oo la filayo mar iney qaraxdo. Jifi walba dhexdeeda waxaa ka karaya dab holac ah.
Dadbaa qaba in Federaalku yahay dhibta. Maya. Federaal ka hor waa jirtay colaaddani. Waxaa huriyey dabkani waa siyaasiyiin daneeysanaya oo kursi raadis ah. Waa kuwa Somaloo wax wadaagta dabka isugu dhiibay oo xasuuqay shacab aan waxba galabsan. Waa siyaasiyiin weli ku hammineysa in kursi iyo mansab ay ku gaaraan ayagoo adeeganaya colaadda qabaailka.
Waxaa la la’yahay waxgarad haga bulshadan oo si daacad ah u walaaleeya. Walaaleyntaa maaha mid qabiil ee waa iney noqotaa mid deegaan iyo deris iyo Somalinimo iyo Muslimnimo.
Bal eeg waxaa wada nool oo dal wada dhistay oo dawlad wada ah qabaail aan innaba waxba ka dhexeyn; luqad, dhaqan, muuqaal, iyo diin: Kenya (Kikuyu, Luo, Swahili, Maasai, Kalenjin, Rendille, Somali iwm), Ethiopia (Oromo, Amhara, Tigray, Somali, Canfar, Guraga, iwm), Tanzania (Bembe, Zigua, Bende, Jiji, Kabwa, Makonde, iwm), Ereteriya (Canfar, Saho, Bilen, Kunama, Rashaida, iwm), Koonfur Afrika (Zulu, Xhosa, Yurubiyaan, Aasiyaan, Swati, Basotho, Tswana, iwm).
Waa dullinimo iyo maangaabni annagoo qoys qura wada ah inaan dhegta dhiigga isu darro in ku dhow 25 sano.
Talo ku socota Siyaasiyiinta, Waxgaradka iyo Culumada
Waa munaafaqad haddaad hoostaa ka waddo dhiillo qabiil. Waa shakhsiyad xummo haddaad kala hadasho, oo marna tolkaa ku boorriso naceyb jiffo Soomaaliyeed, marna umuuqato qof Somalinimo u heegan ah oo ay ku dheehantahay. Waa dullinimo inaad dan gaar kuu ah u baabi’iso danti ummadda oo idil.
Damiirkaaga haku hago; waa haddaad damiir damqanaya leedahay.
Qore: Sharmarke Samatar
Title: Gaalkacyo: Ma Daarood mise Hawiye, kee leh? – Maqaal
Posted by galmada Net, Published at 10:43 PM and have 0 comments